China Setyhula Aluminiyam eqinileyo umzi-mveliso kunye nababoneleli |Zhongming
Iimpawu ze-aluminium veneer
(1) Xa kuthelekiswa namaphepha e-ceramic, iglasi kunye nezinye izinto, i-aluminium veneers inobunzima obulula, amandla aphezulu, ukuqina okulungileyo kunye nokucutshungulwa lula.
(2) Ukugquma komphezulu Ngenxa yokugquma kwePVDF, inokumelana nemozulu entle kakhulu kunye nokumelana ne-UV, umbala ohlala ixesha elide kunye neglosi, ukumelana nokugqwala okuhle, kwaye inokusetyenziswa phantsi kweemeko ezinzima ze -50 °C -80 °C.
(3) Iasidi elungileyo kunye noxhathiso lwealkali .PVDF zokwaleka ingakumbi iAkzo Novel okwangoku zezona zogqumo zibalaseleyo zokusetyenziswa ngaphandle.
(4) Ukusebenza okugqwesileyo kokusebenza, kulula ukusika, i-weld, ukugoba, inokubunjwa kwaye kulula ukuyifaka kwisiza.
5Umqhaphu ofunxa isandi, uboya belitye kunye nezinye izinto ezifunxa isandi kunye nezinto ezikhusela ubushushu zingongezwa ngasemva, onokuncipha okuhle kwedangatye kwaye akukho misi eyityhefu xa kuthe kwatsha.
(6) Umbala unokukhethwa ukuba ube banzi kunye nombala mhle.
(7) Kulula ukucoca nokugcina, kunye nokuhlangabezana neemfuno zokhuseleko lokusingqongileyo.
Igama Iphaneli eqinileyo yeAluminiyam eSetyhula
Isampuli yasimahla Uyilo oluqhelekileyo lunokuba yisampuli yasimahla, umthengi uhlawula imithwalo;
Ukupakisha Isiqwenga ngasinye ngefilimu ecacileyo, i-foam ngaphakathi, kunye nebhegi ye-bubble ngamaplanga okanye iBhokisi leCarton;
I-Indonesia, iiPhilippines, iSingapore, iGhana, iHonduras, iKholombiya, iPeru, iChile, iMexico, iPanama, iBolivia kunye nehlabathi liphela
[Q]:Lithini izibuko lakho lokuthumela ngenqanawa:
A: Tian Port, China
Izahlulo zesikafula esinemisonto yeBase Jack, Plastic Formwork For Column, I-Scaffolding Adjustable Screw Jack, Ikhonkco le-Ringlock scaffolding Bracket, Kwikstage Scaffolding Accessories, Amacandelo e-Scaffolding eRinglock,